Soomaaliya, 03 July 2019
Golaha guurtida Somaliland oo dacwad gudbiyey
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 478-aad
Jeneraal Muuse Maxamed Abtiyoow oo geeriyooday
Allaha u naxariistee Jeneraal Muuse Maxamed Abtiyoow oo horey uga tirsanaa miilatariga Soomaaliya ayaa xalay ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Mareykanka oo Dib u Billaabay Taageerada Ciidaka Soomaaliya
Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dawladda Soomaaliya. Kaalmadaasi ayaa la joojiyey bishii December ee 2017-kii, xilligaasi oo ay soo baxeen eedo ku saabsanaa musuq maasuq oo ka dhan ah ciidamada Soomaaliya.
Nalalka ku shaqeeya Cadceedda oo laga hirgeliyey Sabiid
Tuulada Sabiid ee Gobolka Shabeellada Hoose oo bishii Abril ee sannadkan ay qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa martay marxalado kala duwan.
Taliyihi booliiska Koonfurta Gaalkacyo oo geeriyooday
Soomaaliya oo cabasho ka gudbisay "xad-gudubka" Kenya
War-saxaafadeed maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Xiriirka Caalamig ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Axaddii shalay ay Wasaaraddu u yeertay danjiraha Kenya ee fadhigiisu yahay Somalia, Lt General Lucas Tumbo.
Taliye lagu dhaawacay qarax ka dhacay Gaalkacyo
Wareysi: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa VOA siiyey wareysi uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaallada gobolka Hiriaan, khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo doorashooyinka 2020.
Qatar Airways oo billowday duulimaadyadii Muqdisho
Diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta duulimaadkeedii ugu horreeyey ka bilowday magaalada Muqdishu. Diyaaraddan ayaa wadday 115 rakaab ah, waxayna kusoo hakatay magaalada Jabuuti.